यिनी हुन् आज बिहान बसको ठ’क्करबाट मृ’त्यु भएकी गोरखाकी सृष्टि पन्त ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/यिनी हुन् आज बिहान बसको ठ’क्करबाट मृ’त्यु भएकी गोरखाकी सृष्टि पन्त !
चाबहिलस्थित पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा बिबिएसमा अध्ययनरत सृष्टि पन्तको बसको ठ’क्करबाट नि’धन भएको छ। सुकेधारा चोकनजिक बाटो पार गर्ने क्रममा २१ वर्षीय उनलाई भक्तपुर–नयाँ बसपार्क रुटमा चल्ने बा ४ ख ५९२० नम्बरको बसले बिहान करिब ५:३० बजे ठ’क्कर दिएको थियो ।
बसको ठ’क्करबाट ग’म्भीर घा’इते भएकी पन्तको ओम अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृ’त्यु भएको महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले जानकारी दिएको छ। चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बसको ठ’क्करबाट सहपाठीको मृ’त्यु भएपछि आ’क्रोशित बनेका पशुपति बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले बा ४ ख ७१०१ नम्बरको बसमा आ’गज’नी गरेका छन्।
आ’गज’नीबाट बसमा आंशिक क्ष’ति पुगेको छ। उक्त घ’टनापछि चाबहिल, सुकेधारा र मित्रपार्क क्षेत्रमा सुचारु ढङ्गबाट यातायात सञ्चालनमा केही समय अ’वरोध भएको थियो। प्रहरी र विद्यार्थीबीच केहीबेर झ’डप समेत भएको थियो।
चीनले सीमाक्षेत्रका सैनिकलाई मार्सल आर्ट सिकाउने
विजय चौधरीलाई विनापैसा ६ वर्षदेखि घ’रेलु काममा लगाएका थिए कार्की परिवारले !
कोरोना भाइरस लागेमा सिधै मृ-त्युद-ण्ड दिने किम जोङको निर्णय